Fanazavana ny drafitra marolafy hiatrehana ny hamehana | Primature
Mahazoarivo, 18 jona 2020 – Nandritra ny fihaonana teo amin’ireo mpandraharaha sy ny fitondram-panjakana, izay notarihin’ny Filohan’ny Repoblika, omaly 17 jona 2020 no nitondran’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian fanazavana mahakasika ny drafitra marolafy hiatrehana ny hamehana na “plan multisectoriel d’urgence”.
Araka ny nambarany dia ilaina ny isian’ny drafitra iray ahafahana mampitovy ny fomba fijery ho an’ny tombotsoa iombonana izay miainga avy amin’ny filàna tena laharam-pahamehana. Ka lalan-kevitra telo lehibe no hirosoana ny amin’ny fametrahana ny drafitra marolafy, dia ny fanamafisana ny ady atao amin’ny valan’aretina Corona virus, ny mikasika ny fiahiana ara-tsosialy, ary ny tohana ara-toekarena ahafahana manarina izany amin’ny fomba mahomby sy maharitra.
Eo amin’izay sehatry ny toekarena izay dia, nampatsiahy ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana ny Praiminisitra toy ny fanalefahana ny fandoavana ireo hetra, haba ary tataon-ketra, ny fahafahan’ireo mpandraharaha manantona ny CNAPS sy ny Jirama mahakasika ny fandaminana ny fandoavana ny latsakemboka na faktiora tokony efain’ny orinasa.
Ezaka goavana ataon’ny fitondram-panjakana ihany koa ny fanajanonana ny fandoavana ny “acompte provisionnel” ho an’ireo mpandraharaha misehatra eo amin’ny lafiny fizahantany, fitaterana an’habakabaka ary ireo orinasa afakaba, kanefa kosa ny fanambarana mikasika izany dia tokony atao mialoha ny faha 15 ny volana aogositra ho avy izao.
Voarakitra ao anatin’ity drafitra ity ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa fototra sy fotodrafitrasa famokarana amin’ny fotoan-tsarotra tahaka izao, ka ilaina ny fampiasam-bolam-panjakana izay hiteraka asa ho an’ny faritra rehetra ary ho fanomezan-danja ny fitsinjaram-pahefana ihany koa, hoy hatrany ny Praiminisitra.
Noresahana ihany koa ny famatsiam-bola ho an’ireo orinasa bitika, madinika ary salantsalany amin’ny tahan-janabola ambany dia ambany, mbola hisy ny dinika mahakasika izay zana-bola izay. Hisy ihany koa ny rindran-damina hapetraka amin’ny fampiasam-bola amin’ireo orinasa misehatra amin’ny sehatra maro, na orinasa vao misandratra, na orinasa mandalo fahasahiranana, na orinasa mitetika fivoarana izany.
Zava-dehibe ao anatin’ny drafitra marolafy ihany koa ny fanampiana ho amin’ny fanjifana sy ny fivelaran’ny tsena, ka omena vahana ny vita malagasy ary hampiana ireo orinasa amin’ny fanapariahana ny vokatra sy ny fanentanana ny tsena anatiny sy any ivelany.
Laharampahamehana ihany koa ny famoronana asa sy ny mpiasa ka izay no nahatonga ny Filoha niresaka mahakasika ny fahafahana manampy ny fanofanana ny mpiasa amin’ny alalan’ny “fonds malagasy de formation professionnelle” ary hojerena ny fahafahana manatevina ny kitapom-bolan’izany fonds izany.
← Lahateny fanolorana ny tatitra mahakasika ireo fandaharan’asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana
Fametrahana lamina ho fiadiana amin’ny fihanaky ny valan’aretina Covid-19 ao Analanjirofo →